Yini Izindleko Zokuthola Ukuqhathanisa Nokugcina Ikhasimende? | Martech Zone
Yini Izindleko Zokuthola Ukuqhathanisa Nokugcina Ikhasimende?
NgoLwesithathu, ngoMashi 9, 2016 Douglas Karr
Kunokuhlakanipha okukhona ukuthi izindleko zokuthola ikhasimende elisha kungaba izikhathi eziphindwe kayi-4 kuya kwezi-8 izindleko zokugcina eyodwa. Ngithi ukuhlakanipha okukhona ngoba ngiyabona ukuthi izibalo zivame ukwabiwa kepha angikaze ngithole insiza yokuhamba nayo. Angikungabazi ukuthi ukugcina ikhasimende kubiza kancane kunhlangano, kepha kukhona okuhlukile. Ebhizinisini le-ejensi, ngokwesibonelo, ungajwayelekile ukuhweba - iklayenti elihambayo lithathelwa indawo elinenzuzo enkulu. Kulokhu, ukugcina ikhasimende ayengakwenza kubiza imali yebhizinisi lakho ngokuhamba kwesikhathi.
Akunandaba, izibalo eziningi ziphelelwe isikhathi ngenxa yomthelela wamakhasimende emizamweni yethu yokumaketha. Imithombo yezokuxhumana, ubufakazi obuku-inthanethi, amasayithi wokubuyekeza, nezinjini zokusesha zinikeza ngezimoto ezinhle kakhulu zokudlulisela kumakhasimende amasha. Lapho izinkampani osebenza nazo ziyaneliseka, zivame ukuhlanganyela lokho nenethiwekhi yazo noma kwamanye amasayithi. Lokhu kusho ukuthi ukugcinwa okungafanele kulezi zinsuku kuzoba nomthelela omubi isu lakho lokutholwa!
Ukutholwa kuqhathaniswa namafomula okugcina (Okonyaka)
Isilinganiso Sokuheha Amakhasimende = (Inani Lamakhasimende Ahamba Njalo Ngonyaka) / (Ingqikithi Yenani Lamakhasimende)
Isilinganiso Sokugcinwa Kwekhasimende = (Ingqikithi yenani lamakhasimende - Inani lamakhasimende ahamba unyaka nonyaka) / (Inani eliphelele lamakhasimende)
Inani Lokuphila Kwekhasimende (CLV) = (Inani Lenzuzo) / (Isilinganiso Sokuheha Amakhasimende)
Izindleko Zokutholwa Kwamakhasimende (CAC) = (Ingqikithi Yesabelomali Sokumaketha Nokuthengisa Okubandakanya Amaholo) / (Inani Lamakhasimende Atholakele)
Izindleko Zokubanjwa = (Inani Lempilo Yesikhathi Samakhasimende) * (Inani Lamakhasimende Alahlekile Ngonyaka)
Kubantu abangakaze benze lezi zibalo ngaphambili, ake sibheke umthelela. Inkampani yakho inamakhasimende angama-5,000 500, ilahlekelwa yi-99 kuwo unyaka nonyaka, futhi ngayinye ikhokha u- $ 15 ngenyanga ngensizakalo yakho ngenzuzo yenzuzo engu-XNUMX%.
Isilinganiso Sokuheha Amakhasimende = 500/5000 = 10%
Isilinganiso Sokugcinwa Kwekhasimende = (5000 - 500) / 5000 = 90%
Inani Lokuphila Kwekhasimende = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00
Uma i-CAC yakho ingama- $ 20 ngeklayenti ngalinye, lokho kuqinile buyela ekutshalweni kwezimali, usebenzisa u- $ 10k ukufaka amakhasimende angama-500 asele. Kepha kuthiwani uma ungakhuphula ukugcinwa okungu-1% ngokusebenzisa enye i- $ 5 ngekhasimende ngalinye? Lokho kungaba ngama- $ 25,000 asetshenziselwe uhlelo lokugcina. Lokho kuzokhulisa i-CLV yakho isuke ku- $ 1,782 iye ku- $ 1,980. Ngesikhathi sokuphila kwamakhasimende akho ayi-5,000 XNUMX, usanda kukhulisa umugqa wakho ophansi cishe ngamaRandi ayisigidi.
Eqinisweni, ukwanda okungu-5% kwamanani wamakhasimende #ukukhulisa inzuzo kwenyuka ngo-25% kuye ku-95%
Ngeshwa, ngokusho kwedatha efakwe kulokhu infographic kusuka ku-Invesp, Izinkampani ezingama-44% zigxile kakhulu ekutholakaleni kwe- # ngenkathi i-18% kuphela igxile ku- # ukunakekelwa. Amabhizinisi adinga ukubona ukuthi okuqukethwe namasu wezenhlalo kaningi ahlinzeka ngokubaluleka okukhulu kunendlela yokugcina kunalokho akwenza ngokutholwa.
Tags: ukutholwa kuqhathaniswa nokugcinwa kabushaIzindleko Zokubanjwaizindleko zokutholwa kwamakhasimendeukutholwa kwamakhasimende nokugcinwaIsilinganiso Sokuheha Amakhasimendeinani lempilo yekhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeisilinganiso sokugcinwa kwamakhasimendeinfographicinvesp
I-Compass: Thola Izithokozi Ezigcina Ukugcinwa Kwekhasimende
Mar 10, 2016 ku-1: 13 AM
Lona ulwazi ngqo ebengilufuna. Siyabonga ngokwabelana ngobuchwepheshe bakho!
Mar 15, 2016 ku-12: 12 PM
Ngiyabonga ngokuthi ngiyifundile i-athikili yenu. Lokhu kuzoba nomthelela ezinqumweni zami zesikhathi esizayo ebhizinisini lami. Sidinga ukubanakekela ngempela labo abathembekile kithi.